ओलीका कुन कुन बिरालाहरू देउवाको भान्सामा दूधभात खान पुगे ? - Baikalpikkhabar
ओलीका कुन कुन बिरालाहरू देउवाको भान्सामा दूधभात खान पुगे ?
काठमाडौं, भदौ १९ / नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी बनाएका माधव नेपाल पक्षप्रति कटाक्ष गरेका छन् । शनिवार काठमाडौँमा भएको पार्टीको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले माधव नेपालले नेकपा एस पार्टी बनाएको नभई काँग्रेस र देउवाका लागि ‘यस’ पार्टी बनाएको भन्दै व्यङ्ग्य गरे ।
उनले एमाले छोडेर अहिलेको सरकारमा जान तयार गरिरहेकाहरुलाई देउवाको भान्छामा दूध भात खान गएका बिरालाहरूको संज्ञा दिए । उनले भने–‘अहिले हाम्रो घरका बिरालाहरू शेरबहादुर देउवाको भान्सामा पुगेका छन् । दूध र भात खान पाइन्छ भन्दै म्याउ गर्दै ढुक्नलाई पुगेका छन् ।’
शनिबार, १९ भदौ, २०७८, दिउँसोको ०४:५० बजे